Addisu Arega Kitessa Waldaa Atileetota Oromiyaa – Hagayya 9, 2017 —- Oromiyaan galaana atileetotaati. Atileetiksiin aadaa ,duudhaa fi eenyummaa Oromooti. Seenaa biyyattii keessatti atileetotni Oromiyaa keessaa bahan yeroo Atileeti Abbabaa Biqilaa irraa kaasee hanga har’aatti jechuunis (Almaaz Ayyaanaa, Xurunash Dibaabaa Fi Ganzabee Dibabaa fi kkf)tti kallacha injifannoo Oromoo qofa utuu hinta’in biyyaa fi ardii Afriikaatiif miira […]
Dhábasá Wakjira Gemelal· Hagayya 9, 2017 – Roobii galgala keessa sa’aa 2:30 konkoolaattonni finfinnee irra gara Wallaggaa Amboo keessa darbaa jiranii %70 rukutamanii darbaa jiru. Lakkoofisii isanii baayyee dha. Kanaafuu qabeenyi kun kan TPLF /opdo fi kan hidhata sanii qabniidha. Qeerroon mamii tokko malee tarkaanfii cimaa akka itti fufuu waliif dabarsaa. Itti muddi !